Dele Alli Oo Budhcad Hubaysan Ugu Dhacday Gurigiisa, Jidh-dil Loo Geystay Iyo Alaab Qaali Ah Oo Xoog Lagaga Qaatay - Gool24.Net
Dele Alli Oo Budhcad Hubaysan Ugu Dhacday Gurigiisa, Jidh-dil Loo Geystay Iyo Alaab Qaali Ah Oo Xoog Lagaga Qaatay
Xiddiga reer England ee Dele Alli ayay budhcad hubaysan ugu daataday gurigiisa xilli habeennimo ah, waxaanay gacanta ula tageen laacibkan oo ay la joogeen gacalisadiisa iyo walaalkii.
Ciidamada ammaanka ayaa baadi-goobaya budhcadda oo si degdeg ah uga cararay guriga markii ay gacanta ku dhigeen saacado qaali ah iyo dahab qiimihiisa lagu qiyaasay kumannaan Gini oo yaallay qasriga uu laacibkani ka deggan yahay magaalada London ee qiimihiisu yahay £2 milyan ee Gini.
Dele oo ay da’diisu tahay 24 jir ayaa aya markii ay budhcaddu soo gashay waxa uu kaabadaha hoose la joogay gacalisadiisa Ruby Mae, walaalkii Harry, dumaashidii iyo qof kale oo ay saaxiibbo yihiin waxaana xilli ay saacaddu ku beegan tahay saqdii dhexe ee waqtiga London ama 12.30am guriga usoo daatay budhcad wajiga soo qarsatay.
Isla markiiba waxay gacan u qaadeen Dele Alli oo ay wax kaga dhufteen afka, sidoo kalena waxay gacantoodu gaadhay qof kale oo ka mid ahaa dadkii guriga joogay, waxaanay si degdeg ah uga dalbadeen inay soo wareejiyaan alaabooyinka qiimaha leh ee fudud ee ay markaa haysteen.
Mid ka mid ah budhcadda ayaa markiiba u cararay dhinaca sare ee guriga, waxaanu baadhitaano ku bilaabay dhawr qof oo hurdo oo uu laacibkani leeyahay.
Goob-jooge aan magaciisa la sheegin ayaa wargeyska The Sun uga warramay sidii ay wax u dhaceen, waxaanu yidhi: “Kooxdu waxa ku dhacay argagax weyn.
“Dele wali muu seexanin waqtigaas, waxaanu kula ciyaarayay berkadda markii weerarka lagu soo qaaday guriga.
“Wax walba waxay ka bilaabmeen dabaqa hoose, Dele na waxa afka feedh kaga dhuftay mid ka mid ah labada budhcadda ah ee wajiga soo duubtay.
“Mid ka mid ah Dele asxaabtiisa ayaa isku dayay inuu dib usoo istaago, isagana waa la garaacay.
“Kaddib markii ay dhaceen laba saacadood oo qaali ah oo Dele leeyahay, mid ka mid ah budhcadda ayaa dabaqa sare koray oo kasoo qaatay alaabooyin dahab ah.”
Dele Alli iyo saaxiibkii midna uma baahanin in cusbitaalka loo qaado oo laga daaweeyo nabarrada gaadhay, laakiin waxa gaadhay naxdin iyo argagax nafsi ah oo ay ka qaadeen budhcadda usoo daadatay habeennimada.
Qof kale oo ka ag-dhow Dele ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay: “Labada qof waxay ku hubaysnaayeen mindiyo, waxay qaateen alaabooyin, waxay dalbadeen saacaddii ku xidhnayd gacanta Dele.
“Waxa iyaguna halkaa joogay gacalisadiisa, Harry iyo saaxiibaddii iyo waliba qof kale oo halkaa kula nool, markaa dhawr qof ayay xilligaas ku joogeen goobta.
“Booliska ayaa la wacay oo muddo saacado ah ku qaatay inay ururiyaan warbixino iyo wixii ay duubeen kaamirooyinka guriga ku rakiban.”
Booliska ayaa waxay aaminsan yihiin in si badheedh ah loo bartilmaameedsaday Dele Alli oo usbuucii mushahar ahaan u qaata lacag gaadhaysa 150,000 Gini, waxaanay saraakiil ka tirsan ciidanku guriga joogeen illaa qorraxdu soo baxaysay.